टानको महासंग्राम चलिरहँदा टिबानमा पनि निर्वाचन, लोहनी र थापा भीड्दै | .:: Welcome || Paryatannews
Home » फ्ल्यास न्यूज » टानको महासंग्राम चलिरहँदा टिबानमा पनि निर्वाचन, लोहनी र थापा भीड्दै
टानको महासंग्राम चलिरहँदा टिबानमा पनि निर्वाचन, लोहनी र थापा भीड्दै
पर्यटनन्यूज, काठमाडौं । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ् नेपाल (टान)को चुनावी महासंग्राम चलिरहँदा पर्यटक यातायात व्यवसायीहरुलाई पनि चुनावले धपक्कै छापेको छ ।
टुरिष्ट बस एसोसिएशन नेपाल (टिबान)को भोली शनिवारसातौं बार्षिक साधारणसभा तथा निर्वाचन हुँदैछ । नयाँ कार्यसमितिका लागि सर्वसम्मत गराउने लामो प्रयास रहे पनि अन्ततः निर्वाचन नै हुने भएको छ । भोली हुने निर्वाचनमा प्रल्हाद लोहनी र टंक थापाबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । लोहनी बाबा एड्भान्चरका सञ्चालक हुन् भने थापा दीपज्योति एड्भान्चरका सञ्चालक हुन् । उनीहरु दुबै यस अघिका कार्यसमिति सदस्यमा रहेका थिए । टिबानको नेतृत्वका लागि तीन व्यक्ति आकांक्षि देखिए पनि हालका प्रथम उपाध्यक्ष ईश्वर शर्मा भने पछि हटेका छन् । उनी सर्वसम्मत नेतृत्व लिने पक्षमा देखिन्थे ।
यसैबीच, केही पदाधिकारीहरु सर्वसम्मत भएपनि महासचिवमा पनि चुनाव हुने भएको छ । महासचिवका लागि रेन्बो सफारीका प्रबन्ध निर्देशक सुशील दाहाल र यति एड्भान्चरका प्रबन्ध निर्देशक कृष्ण आचार्यबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । दाहाल यस अघि पनि एक कार्यकाल महासचिव थिए भने आचार्य कार्यसमितिको सदस्य रहेका थिए ।
निर्विरोध निर्वाचित हुनेहरुमा भने प्रथम उपाध्यक्ष ढकनाथ काफ्ले, द्वितीय उपाध्यक्ष भिष्म न्यौपाने, कोषाध्यक्ष दीपेन्द्र अधिकारी र सदस्यहरुमा रुपेन्द्रराज श्रेष्ठ र विज्ञान भुजल रहेका छन् । नौ सदस्यीय कार्यसमिति रहेन टिबानमा एक सदस्य नयाँ कार्यसमितिले मनोनित गर्नेछ । सातौं साधारणसभा तथा निर्वाचन ठमेल स्थित गोकर्ण रेष्टुरेन्टमा हुने भएको छ ।
टानको महासंग्राम चलिरहँदा टिबानमा पनि निर्वाचन, लोहनी र थापा भीड्दै Reviewed by Shiva Shrestha on Oct 27 . पर्यटनन्यूज, काठमाडौं । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ् नेपाल (टान)को चुनावी महासंग्राम चलिरहँदा पर्यटक यातायात व्यवसायीहरुलाई पनि चुनावले धपक्कै छापेको छ । टुरिष पर्यटनन्यूज, काठमाडौं । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ् नेपाल (टान)को चुनावी महासंग्राम चलिरहँदा पर्यटक यातायात व्यवसायीहरुलाई पनि चुनावले धपक्कै छापेको छ । टुरिष Rating: 0